Ama-Podcast angama-20 ahamba phambili okuzisiza - Ubuchwepheshe
Ukusuka Ekuhlanzeni Kuze Kwezimali, Lawa maPodcast angama-20 okuzisiza azokwenza ube ngcono empilweni
From Cleaning Finances
Ngabe ukhohlwe konke ngalesi sinqumo sonyaka omusha sokuthi ekugcineni ufunde ukuthi ungatshala kanjani imali noma uqale ukuqeqesha i-10K? Ungalindi kuze kube nguJanuwari ozayo ukuze uzithembise into efanayo: Thatha isigamu sehora khona manje ukulalela enye yalezi zinhlelo zokuzisiza ezinokuqonda esikhundleni salokho. Niyabo? Usuvele uthuthuka.
OKUSHIWO: Ama-Podcast Wokukhuthaza angama-22 Okungezwa Kulayini Wakho Lapho Udinga i-Oomph Encane Osukwini Lwakho
izinwele ezingadingeki ekususweni kobuso ngokwemvelo
I-Savage Lovecast / Ezwakalayo
Umlobi wephephabhuku wezeluleko zocansi onesizini uDan Savage akesabi ukuthatha ungene ngokujulile kulokho okwenzekayo (nokuthi yini) egumbini lokulala. Ungazuza ekuhlakanipheni kwakhe ezindabeni zenhliziyo (noma ezinkalweni, njengokungathi) lapho umlalela ekutshela njengokukuyo Savage Lovecast —I-podcast yeseluleko sokubizela kokubili okuqondayo nokuhlekisayo (futhi ungalokothi uhlakaniphe). Ibhonasi: Uma ukhona Lovecast -ulukuluku, ungaqala ukulalela iziqephu ezincane mahhala ngaphambi kokuthuthukela kokubhaliselwe kwe-magnum.
Kufanele Siqalephi? / Kuzwakale
2. Kufanele Siqalephi?
Lokhu kukuvumela ukuthi ulalele ekubonisaneni kwangempela, okungabhalwanga kwemibhangqwana engaziwa nodokotela wezengqondo owazalelwa eBelgium, ongamkhumbula kusukela ku-2015 TED Talk Rethinking Infidelity. Ngokungafani Savage Lovecast ,U-Esther Perel’s Kufanele Siqalephi? inikeza amazwibela ebudlelwaneni obuvela ezinhlangothini zombili, hhayi kuphela izinto ezenzeka phakathi kwamashidi. Noma ngabe awubhekene mathupha nokukhubazeka okufanayo, ukuzwa lezi zithandani zisebenza ngezinkinga zazo (noma cha) kulolu chungechunge oluyizingxenye eziyishumi kungasiza noma ngubani ukuzwelana kakhudlwana nabathandekayo ezimpilweni zabo.
3. Buza Umuntu Ohlanzekile
Isazi sokuhlanza uJolie Kerr weluleka ngemisebenzi eminingi elula ongakayazi (njengokukhathalela i-denim yakho enentengo noma ukuhlanza ngemuva kwenja yakho) nezinto onamahloni kakhulu ukuzibuza. Akunandaba ukuthi ucoceka kanjani endlini yakho yokugezela, ngokungangabazeki uzothatha ithiphu noma ezimbili emibuzweni yomlaleli evikini Buza Umuntu Ohlanzekile .
4. I-Slob Ifika Ihlanzekile
Uma ungathanda ukuthola iseluleko sakho sokuhlanza kumuntu ongekho ngokwemvelo ngokuhlala ehlanzekile futhi ehlelekile, uDana K. White uyintombazane yakho. Ku-podcast yakhe I-Slob Iza ihlanzekile wabelana ngamathiphu wokuhlanza nokuhleleka asebenza empilweni yangempela. (Ngamanye amagama, iseluleko sakhe asidingi ukuthi ube nesikhathi esanele sokwenza umsebenzi wokugcina ikhaya lakho lihle.) Okuhle kunakho konke, isitayela sakhe siqabulekile phansi futhi sigcwele amahlaya angenanhlonipho ukuqinisekisa ukuthi Uhlelo lunolwazi futhi luyajabulisa ngokuphelele kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Shintshela ku- Okudingayo noma nini lapho udinga i-inspo ethile ebalulekile ukuqhubeka nokulandela izifiso zakho ezinkulu: Le podcast ecabangelayo nehehayo izinikele ekuhloleni impumelelo yabanye babantu abaphawuleka kakhulu kuyo yonke imikhakha, nakuzo zonke izindlela zokuphila. Izihambeli zangaphambilini zifake inganekwane ye-baseball uHank Aaron, ophethe uhlelo lwezingxoxo uLarry King, umculi uJudy Collins kanye nomlobi wezithombe owina uMklomelo wePulitzer uCarol Guzy. Isiqephu ngasinye se-podcast sinezindaba zomuntu siqu kanye nokuqonda komuntu ohlukile othusayo, ohlolwe kanye nezingxoxo ezivela e-American Academy of Achievement. Kwanele ukusho ukuthi ukulalela okukodwa kuzokwenza ufune ukuba ngumuntu ongcono kakhulu kuwe.
I-Challengers eno-Amy Brenneman / Apple
6. Izinkinga no-Amy Brenneman
I-podcast ehambayo eqinisekile ukukunika amandla noma kunini lapho uqala ukuzizwa njengesisulu sesimo— I-Challengers eno-Amy Brenneman ifaka izindaba ezisondelene nabantu abaye bahlangabezana nazo zonke izinhlobo zezinselelo — ukugula, izikweletu, ukungabi nenzalo (ukubala nje ezimbalwa) - futhi bakwazi ukuzinqoba. Ukuthatha? Lolu hlelo lusebenza njengesikhumbuzo samasonto onke sokuthi awuwedwa ekubhekaneni nobunzima (obukhulu noma obuncane) —nalokho izinto ezikwehlisayo kungenzeka ekugcineni ziveze isithembiso sakho namandla akho.
IMarie Forleo Podcast
7. IMarie Forleo Podcast
IMarie Forleo Podcast imayelana nokukusiza wenze impilo yakho ibe ngcono, ngezindlela eziningi kuneyodwa. Okuqukethwe kumboza izihloko ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukuzinza kwezezimali, ezempilo kanye nokuphila kahle, ubuhlakani, ukubuyisela emuva, ukukhiqiza ... uyazi, izinto zenjabulo. Iphuzu eliyinhloko: Izinhlelo zihlukahlukene ngokwanele ukukugcina ubuya ngokuningi, kanti uMarie Forleo — ongu-Oprah odumisa ‘njengomholi ocabangayo’ — ugcwele izeluleko ezisebenzisekayo uma kuziwa ekugcineni impilo yakho ikhuphukile.
UJoanna Shaw Flamm noDaphnie Yang
8. Okukodwa nje
Joyina umbhali / umlingisi uJoanna Shaw Flamm kanye nomeluleki womqeqeshi / wokudla okunomsoco uDaphnie Yang njalo ngoMsombuluko ngomhlaka Okukodwa nje ingxoxo yezempilo yesikhathi sangempela yabantu abasadla isinkwa. Ngaphandle kokunikeza ngamathiphu abonakalayo ezihlokweni ezinjengokuvimbela nokwelulama ekulimaleni, ukuhlela ukudla nokuthenga ezitolo, nokuhlala uphilile phakathi nohambo lwebhizinisi, ababambisene nabo bathinta izihloko ezibucayi kakhulu, njengokwelashwa kwezithandani, ukuhlazeka komzimba nokudla okungokomzwelo.
9. Sika Amafutha
Ngokuphikisana nokunye okuqukethwe okuhlukahlukene kakhulu okuvezwe kwamanye ama-podcast ezempilo nokuphila kahle, ukugxila lapha kuncane kakhulu — okungukuthi, ungayifeza kanjani imigomo yakho yokwehlisa isisindo. Lokho kusho, Sika Amafutha kuyipikili ngempela ngohlelo olufaka izingxoxo nodokotela kanye nochwepheshe abahlukahlukene abalinganisa izindlela eziphumelela kakhulu zokwehlisa isisindo, baxoxe ngezindlela zokudla zakamuva bese bekhipha lezo mbumbulu ukuze ukwazi ukugcina amaqiniso akho eqondile futhi uhlale uphilile njengoba usebenzela umzimba wakho omuhle.
10. Indlela Yokwesabeka Emsebenzini Wakho
Akunandaba ukuthi ungumfundi noma uyi-CFO, kuhlale kunendawo yokwenza ngcono. Faka uPete Mockaitis, umqeqeshi oyinhloko nomsingathi we Ungasabeka Kanjani Emsebenzini Wakho , lapho axoxa khona kaningana ngesonto nososayensi bezengqondo, ababonisi, onxiwankulu bokuzibandakanya nabanye ukuze basinde kwezepolitiki yasehhovisi, abhekane nozakwabo abanzima, umkhiqizo omkhulu nokuningi. Umatasa kakhulu ukuyibulala emsebenzini ulalele isiqephu? Vele ubhalise i-newsletter yeGolden Nugget, okuyibilisa kuze kufike ekuthathweni okuphezulu kusuka kwinhlolokhono ngayinye.
Abesifazane abakhulu noRebecca Minkoff / Spotify
11. Abafazi abakhulu noRebecca Minkoff
Akunzima ukukhuthazwa ngabadlali abajikelezayo bezivakashi ezinhle kakhulu Abesifazane abakhulu , i-podcast ebanjwe ngumsiki wengqephu uRebecca Minkoff eveza izindaba zempumelelo zabesifazane kuyo yonke imikhakha — kusuka kwezobuciko obubonwayo kuya kwezamabhizinisi. Lokhu kulalela okuzuzisa ngokukhethekile ngoba uMinkoff uzibophezele ekukugcineni kungokoqobo, futhi izivakashi zakhe zineqiniso elifanayo, zihlanganyela kalula okuhle, okubi nokubi kwesenzo sokulinganisa abasiphethe ngenkathi belwela (futhi befeza) impumelelo kulokho abakuthandayo.
Ngayakha Kanjani Le / NPR
12. Ngikwakhe Kanjani Lokhu
Ngikwakhe Kanjani Lokhu —Enye i-podcast ekhonza ugqozi masonto onke — uhlelo lwe-NPR lapho umphathi uGuy Raz, ekhuluma nosomabhizinisi abavela kuwo wonke umhlaba (muva nje umsunguli we-JetBlue) futhi ubavukuze ngezimfihlo zabo zokuphumelela kanye nezinye zezingqinamba bahlangabezana nazo endleleni. Le igcwele ifolishi lamaphupho akho amakhulu.
Imali SO / Sticher
13. IMALI ENJALO
UFarnoosh Torabi, usomaqhinga owine umklomelo wezezimali futhi umbhali othengisa kakhulu, uphethe le podcast enobuhlakani ekuphathweni kwemali ngempumelelo nakuzo zonke (eziningi) izihloko eziphambene (cabanga: ubuhlanga, ubulili nokukhubazeka). Vele, kunolwazi oluningi olujwayelekile olunikezwayo lapha — isiqephu sakamuva sihlanganise yonke into kusukela ekufanelekeni kokukhokhela umshuwalense wokuphila kuye ezindleleni ezonga imali kakhulu zokutshala imali.
Ama-Fairer Cents / Stitcher
14. Ama-Fairer Cents
Uma ufuna ukwelulekwa kwezezimali kusuka kwilensi yombono wabesifazane abaningi, Amasenti Wenzuzo izolunga i-alley yakho. Le podcast igxile ekukhulumeni iqiniso ngamaqiniso ezomnotho angathandeki kangako abesifazane kanye namanye amaqembu akhishwa inyumbazane abavame ukuhlangabezana nawo. Abaphathi uTanja Hester noKara Perez babhekana ngokungesabi nezinkinga ezithinta ezenhlalo nezomnotho kubandakanya igebe lamaholo, ukusebenza ngokomzwelo kanye nomnotho womama, ngenkathi benza izeluleko ezisebenzayo zokunika amandla wonke amaqhawe angagciniwe aqhubeka nomnotho ngaphandle kokuba kuzwakale amazwi abo.
I-Krista Tippett Public Productions
Noma ngabe uyisibukeli esiqinile seShabbat noma ungakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona impilo yakho yonke, kungenzeka ukuthi ukhanyisile ngobukhona bomuntu. Yilokho kanye uKrista Tippett, owanikezwa iNational Humanities Medal, akuhlolisisayo ngokuwina kwePeabody Kubuntu . IPodcast yamasonto onke ifaka izivakashi eziningi ezahlukahlukene ukuxoxa ngobunzima bempilo, njengokuqina emuva kokulahlekelwa noSheryl Sandberg.
Izingxoxo / i-Apple ye-Oprah
16. Izingxoxo ze-SuperSoul ze-Oprah
Ngokwesitayela sangempela se-Oprah, le podcast isebenza ngokusiza ngomusa ekunikezeni amandla kanye nasekusebenzeni kabusha-konke ngokwesimo salezi zinkanyezi ezibamba izingxoxo ezishukumisa umcabango ngazo zonke izinto zabantu ezinezikhanyiso ezingokomoya kanye nezazi zokusebenza kwengqondo ngokufanayo. Ukuthatha? Uma ufuna ukufuna umphefumulo futhi ubuye uzizwa ufudumele futhi ungacabangi, i-Oprah yindlela okufanele uhambe ngayo.
17. Izikhathi Zomama
Ku- Izikhathi Zomama , isazi sokusebenza kwengqondo esidumile sokuzala uDkt. Alexandra Sacks unezingxoxo ezinzima nomama bangempela abathi — ekuvulekeni ngobuthakathaka, ukungabaza kanye nenjabulo — bapende isithombe esiluhlaza sobuzali esibuhlungu ngaso leso sikhathi futhi esilandelwa ngokumangalisayo. Abazali kufanele bavumelane ngomthamo wokusondelana nobuntu okuqinisekile ukuthi kuzwakala kabusha.
U-Elise R Peterson
18. Omama Abapholile
Abesifazane abaningi balwa nokushintshashintsha kobunikazi okuza ngemuva kokuthola ingane, futhi Omama Abapholile iyi-podcast ezinikele ekusizeni labo besifazane ukuthi bazithole futhi. Ngamazwi akhe, umphathi we-Elise R Peterson udale le podcast esekwe kungxoxo ukugqamisa omama ababeka phambili izinkanuko zabo nokuba ngumzali. Uma ufuna ibhalansi nokunika amandla, le podcast inemhlane wakho.
IChasing Joy Podcast / Apple
19. I-Chasing Joy Podcast
Umphathi walolu hlelo ubheke phambili ngemishikashika yakhe yezempilo yengqondo (phakathi kwayo ukuxilongwa kwe-bipolar kanye nenkinga yokudla) futhi ukhuthaza abalaleli ukuthi bathole injabulo futhi bazamukele noma ngabe babhekene nani. Thembeka futhi uyazi uqobo, lokhu kuyintokozo enkulu ukuyilalela.
Lowo Sober Guy
20. Lowo Sober Guy
Noma ngubani olulame ekuluthekeni uzothintana kalula nesitayela esingavaleki izimbobo nethoni ehlekisayo yale podcast, ephinde yenzeke igcwele izeluleko ezibalulekile ekuzivumelaniseni nendlela entsha yokuphila, futhi ngaphezu kwakho konke, ukuhlala nizithibe.
OKUhlobene : AMAPODEKHODI AYI-12 ANGASISISISA SIFUNDE NGOBUHLANGANO NOBUHLANGA
Izithelo nemifino ecebile iodine
valentine's day dinner imibono
priyanka chopra no-nick
ama-movie angokomlando amahle kakhulu we-hollywood